रक्सीले बिगार्छ कलेजो | Nagarik News - Nepal Republic Media
रक्सीले बिगार्छ कलेजो
२६ वैशाख २०७५ ५ मिनेट पाठ
काठमाडौं - भक्तपुर ब्यासीका ५१ वर्षीय रवि प्रजापति यतिखेर वीर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । गत पुसदेखि बिरामी भएका प्रजापतिले सिभिल अस्पतालमा दुई महिना बिताए । केही समय घरमै औषधि खाएर बसे । निको नभएपछि उनी वीर अस्पतालमा पुगेका हुन् । लामो समयसम्म रक्सी सेवन गरेका कारण उनको कलेजो बिग्रिएको छ।
‘डाक्टरले कलेजो बिग्रेको छ भनेका छन्,’ रविकी पत्नी विद्याले भनिन् । विद्याका अनुसार उनले विगत पन्ध्र वर्षदेखि दैनिक रक्सी खाँदै आएका छन् । ‘मेलै नदेख्ने गरेर भए पनि दिनको दुईचार गिलास पिउनुहुन्थ्यो,’ विद्याले भनिन् ।
रविको पेट असामान्य गरी फुलेको छ, अनुहार पहेंलो भएको छ । उनको पाचनशक्तिमा ह्रास आएको छ । उनी थोरै र नरम खानेकुरा मात्र खान सक्छन् । चियापसल चलाएर परिवारको जीविका चलाउँदै आएका उनी बिरामी परेपछि परिवारमा आर्थिक संकट आइलागेको छ । ‘ऋण खोजेर उहाँको उपचार गराइरहेकी छु । ऋण गरेको पैसाले कति दिन पुग्ला र’ उनकी पत्नी विद्याले भनिन् ।
अस्पतालकै फिमेल मेडिकल वार्डमा उपचार गराइरहेकी छन् धादिङ ५५ वर्षीया मोती राना । उनी पनि कलेजो बिग्रेर उपचारका लागि वीर अस्पताल पुगेकी हुन् । उनको अवस्था गम्भीर छ । उनले जीवनभर रक्सी सेवन गरेकी थिइन् ।
अस्पतालको कलेजो विभागका अनुसार अस्पतालमा रक्सी सेवनकै कारण कलेजो बिगे्रर आउनेहरु धेरै छन् । अस्पतालमा वार्षिक चार हजार ८ सय कलेजोका बिरामी आउँछन् । यीमध्ये ६० प्रतिशतको रक्सीका कारण कलेजो बिग्रेको अस्पतालले जनाएको छ । ‘धेरैजसो बिरामी अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्र आइपुग्छन्,’ अस्पतालका कलेजो विभाग प्रमुख डा.अनिल मिश्रले भने ।
वीर अस्पतालमा वार्षिक औसत चार हजार आठ सय जना कलेजोका बिरामी आउँछन् । यीमध्ये ६० प्रतिशतको कलेजो रक्सीका कारण बिग्रेको पाइएको छ ।
कलेजो बिग्रेपछि प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्यारोपण शुल्क निकै महँगो छ । गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई कलेजो प्रत्यारोपण हुन नसकेमा उनीहरुको एकदेखि तीन वर्षभित्र मृत्यु हुन्छ । डा.मिश्र भन्छन्, ‘नेपालमा अहिले पनि कलेजोको पूर्ण उपचारको अवस्था छैन । विदेशमा जान धेरैको पहुँच पुग्दैन ।’विभागका अनुसार रक्सीका कारण कलेजो बिग्रनेमध्यै अधिकांश पुरुष छन् । रक्सी बढी सेवन गरेको कारण कम उमेरमै फोक्सो बिग्रिने गरेको डा. मिश्रले बताए । रक्सीको कुलतमा पर्ने गरेका कारण पुरुषको कलेजो बढी बिग्रिने गरेको चिकित्सक बताउँछन् । डा.मिश्र भन्छन्, ‘भोज, चाडपर्व या संस्कृतिको बहानामा रक्सी पिएकाहरु पछि गएर कुलतमा फस्छन् ।’
रक्सीमा हुने टक्सिन (विषादी पदार्थ) का कलेजोको कोषहरुलाई बिस्तारै नष्ट गर्दै जान्छ । यो क्रम थपिँदै जाँदा कलेजोमा चिल्लो तथा अन्य पदार्थ जम्मा हुन थाल्छ । यसलाई फ्याटी लिभर (कलेजो कडा भएको अवस्था) भनिन्छ । कलेजो बिग्रिन सुरु भएपछि खान मन नलाग्ने, दाहिने कोख दुख्ने, पाचन शक्ति कमजोर हुने जस्ता लक्षण देखिन्छन् ।
यी लक्षण देखिएकै अवस्थामा रक्सी पिउन रोकी उपचारमा पुगेमा सामान्य अवस्थामा फर्किन सकिन्छ । तर धेरैजसो बिरामी ग्यास्टिक भएको भन्दै रक्सी पिउने क्रम रोक्दैनन् । सन्तुलित र सफा खाना खाने, चिल्लो या बोसो नखाने, रक्सी सेवन नगर्ने, नियमित व्यायाम गर्नेजस्ता जीवनशैली अपनाएमा कलेजो नबिग्रने डा. मिश्रले बताए ।
प्रकाशित: २६ वैशाख २०७५ ०७:११ बुधबार